पत्रकारका न्यूनतम परिश्रम लागू हुन्छः संचारमन्त्री राई ! | Magar Media | मगर सन्चार
६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४० May 19, 2016
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले श्रमजीवि पत्रकारका न्यूनतम परिश्रम लागू गराएरै छाड्ने बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को राष्ट्रिय भेलालाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले न्यूनतम परिश्रम लागू गर्न सकिने आधार तय भइसकेको बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको न्यूनतम परिश्रम १९ हजार ५ सय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्री परिषद् बैठकले लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘पहिलेको १०÷१५ हजार लागू भएन भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन’ उनले भने । उनले पत्रकारको दुर्घटना बिमा पनि लागू हुने बताए ।
आम सञ्चार नीति छिट्टै बन्ने उनको भनाई छ । ‘नीति बनाउन उच्चस्तरीय समिति बनेर मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ’ उनले भने, ‘केही दिनमा अन्तिम छलफल हुन्छ र मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’ उनले जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारका हकहित, अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रम समेटिने दावी गरे । उनले आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) लाई संस्थागत रुपमा बार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने नीति मन्त्रालयले ल्याएको जानकारी दिए ।
एक अर्को प्रशंगमा उनले आन्दोलन गरेर समस्याको समाधान नहुने बताए । ‘सवै समस्याको समाधान छलफल र वार्ताबाटमात्रै सम्भव छ । सरकार समस्याको समाधान गर्न तयार छ ।’ उनले भने । अहिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा संलग्न मधेशी तथा आदिवासीलाई बार्तामा आउन उनले आह्वान गरे । ‘संविधान पूर्ण छैन । पहिलो संशोधन भइसकेको छ । आवश्यकमात्रामा संशोधन हु“दै जाने छ’ उनले भने, ‘जातीय संस्थाको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक आयोग गठन भएका छन् । विस्तारै सम्बोधन हु“दै जाने छ ।’ उनले प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै लाने र थप गरिएका उपलब्धीलाई कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको पहिलो प्राथामिकता संविधान कार्यान्वयन र दोस्रो प्राथामिकता पुनःनिर्माण रहेको उनले बताए ।
प्रेस काउन्सिलका बोर्णबहादुर कार्कीले आचारसंहिताविपरित क्रियाकलाप तथा कार्य गर्ने पत्रकार र सञ्चार माध्ययमलाई कारबाही गरिने र गर्दै आएको बताए । ‘सम्झाउनु पर्नेलाई सम्झाउने, बुझाउनुपर्नेलाई बुझाउने र अन्तिममा मात्रै कारबाही गर्ने गरेका छौ“’ उनले भने, ‘कारबाही पत्रकारलाई निरुत्साहित गर्न नभई प्रोत्साहनका लागि गरिएको हो । ब्यवस्थित बनाउन गरिएको हो ।’ उनले सञ्चार माध्ययम धेरै भएकाले नेपालको पत्रकारीता अब्यस्थित हु“दै गएको बताए । ‘ब्यवसायिक बन्न मिसन छोडेर ब्यवसायिक पत्रकारीता गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका महासचिव उजिर मगर, आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव पेम्बा भोटे, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसी, प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, संघीय प्रेस फोरमका अध्यक्ष गोविन्द छन्त्याल, संचारिका समूहकी महासचिव यशोधा अधिकारी, मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह, मधेशी पत्रकार संघका अध्यक्ष पंकज दास, जागरण मिडियाका अध्यक्ष रेम विश्वकर्मा लगायतले पत्रकारको हकहितका लागि राज्यले जवाफदेहिताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भैरब आङ्लाले स्वागत र महासचिव गजुरधन राईले संचालन गरेका थिए ।
संयोजक: भैरव आङ्ला
सदस्य: शाहीमान राई
सदस्य: जीवन लामा
सदस्य: दिपा आलेमगर
सदस्य: यमन दनुवार
सदस्य: ईन्द्रजित मुखिया
लागु औषधको कारोबार गर्दै गर्दा पक्राउ ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
सगरमाथा परोपकारी समाज कुवेत द्धारा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
बृहत मगर विद्यार्थी भेला सम्पन्न ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
१० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमा गर्ने लगायतका निर्णय सहित राष्ट्रिय विस्तारित भेला सम्पन्न ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
कान्छीबाट अभिनेत्री श्वेताको नेपाली चलचित्र जगतमा कमब्याक ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
आदर्श तारा स्मृती कप आयोजकको कब्जामा, पाहुना टोली काहुँ मिलन झापुटार २–० ले पराजित ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
मिनाम लाङ्घाली क्लवद्वारा खुला नकआउट फुटवल आयोजना, स्थानीय लाहुरे टिम बिजयी ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
अब घर घरमा ट्राफिक प्रहरीको कारवाही पत्र ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
विजनेस एण्ड प्रोफेशनल वुमेन सुनाकोठी शाखाको अध्यक्षमा प्रतिमाया पुन चयन ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०
दमौलीमा मातृभाषामा साहित्यीक प्रतियोगिता सम्पन्न साथै मगर लेखक संघ तनहुँको अध्यक्षमा बिनु थापा मगर ! ६ जेष्ठ २०७३, बिहीबार १८:४०